ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၌ အစိုးရဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း - Yangon Media Group
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၌ အစိုးရဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း
ရီယာ့ဒ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဘုရင် ဆော်လမွန်သည် မိမိအစိုးရအဖွဲ့ အား ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအားလည်း ပြင်ဆင်ခန့်ထားလိုက်သည်။ ယင်းသည် သတင်းစာဆရာဂျမဲလ်ခါရှို ဂီအသတ်ခံရခြင်း ကိစ္စရပ်အား နိုင်ငံတကာမှ အာရုံစိုက်နေခြင်း အား လျော့နည်းသွားစေရန် ရည်ရွယ်ချင်းဖြစ်သည်ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျအိမ်ရှေ့ မင်းသား မိုဟာမက်ဘင်ဆော်လမန် အစိုးရအဖွဲ့အုပ်စိုးနေချိန်တွင် သတင်းစာဆရာခါရှိုဂီအသတ်ခံရမှုသည် နိုင်ငံတကာမှ အာရုံစိုက် ခြင်းခံရသောဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ် ခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အဗ္ဗဒဲလ်အယ်လ်ဂျူအီယာအား ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ မင်းညီမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ မင်းသားအဗ္ဗဒူလာဘင်ဘန်ဒါအား အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့အကြီး အကဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မူ ဆေးအယ်လ်အိုင်ဗင်အား အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အ ဖြစ်လည်းကောင်း ခန့်အပ်လိုက်သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့သည် အိမ်ရှေ့ မင်းသားအား အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအကူအညီများပေး အပ်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူပင် တာကီအယ်လ်ရှာဗါနာအား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး၊ အာဝပ်အယ်လ်အာဝပ်သည် တော်ဝင်တရားရုံး တရားသူကြီးချုပ်မူတာကီအယ်လ်ရှိဝန်အား အိမ် ရှေ့မင်းသား၏ လက်ထောက်အ ဖြစ်မှ အားကစားဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း အာမက်အယ်လ် ဒါတစ်အား ခရီးသွားလာရေးဝန် ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းသား နှင့်အာကာသယာဉ်မှူး ဆူလ်တန် ဘင်ဆော်လမန်ကို အမျိုးသားအာ ကာသအေဂျင်စီအကြီးအမှူးအ ဖြစ်လည်းကောင်း ခန့်အပ်တာဝန် များပေးအပ်လိုက်သည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ဘုရင် ဆော်လမွန်သည် သက်တော် ၈၃ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အသက် ၃၃ နှစ် ရှိ အိမ်ရှေ့မင်းသားသည် အစိုးရ အဖွဲ့အား သြဇာအာဏာလွှမ်းမိုးထားပြီးဖြစ်သည်။
ပေါင် ၂၁၆ သန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုတင်သွင်းသူ ဗြိတိန်လူမျိုး ပြင်သစ်တွင် ထောင??
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အဓိကစားကုန် ကြက်သွန်နီ ဈေးကျ
မိုးဦးရာသီ ချင်းတွင်းရေကြောင်း ကောင်းမွန်လာချိန် ဖြစ်သော်လည်း ချင်းတွင်းအညာဆန် ရေယာဉ်မျ?
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကာလအတွင်း လုံခြုံရေးအင်အား တိုးမြှင့်မည်
ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့ တစ်လျှောက်မှာ ဂျိုးဖြူရေပဲ သောက်တာပါ ဆိုတဲ့ လမင်းကဗျာ
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံး ထမ်းဆောင်ခဲ့သ??
မင်းဘူးမြို့ ၌ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပူးပေါင်းကော်မတ?